Is marin waa soo kala dhaxgalay sedex qoyska oo isku haysto meydka haweeney geeriyootay – The Voice of Northeastern Kenya
Is marin waa soo kala dhaxgalay sedex qoyska oo isku haysto meydka haweeney geeriyootay
starfmke August 20, 2016
Xiisad aad u kacsan ayaa laga dareemayay maanta goob lagu magacaabo Lindi oo katirsan xaafada Kibri kadib markii sedex qoys oo kala ah ay isku qabsadeen meydka haweeney geeriyootay.
Sedexdan qoys oo isku hestay xafiiska Jiifka ee aagaasi ayaa midkiiba ku doodayay in ay leeyihiin mise doonayan in ay iyaga aasaan meydka.
Tan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in haweeneydasi geeriyootay ay goor hore gursatay sedex nin oo kala duban kuwaas oo hadda qoysaska ay kasoo jeedan sedexdaas nin ay doonayan in ay duugtaan meydkaasi maadama ay kamid ahayd oo caruur ay u dhashay.
Jiifka xafadaasi Peter Omolo ayaa waqti adag la kulmay sidii uu u go’aamin lahaa qoyska meydkaasi la siin karo si ay u aastaan maadama sedexdaas qoysba u midkiiba ku doodayo in ay qof kamid ah qoyska soo gursatay oo ay caruur u dhashay.
Sida wararka ay sheegayaan haweeneydaasi geeriyootay oo 57 sano jir ahayd ayaa seygeeda hore u dhashay 3 caruur, waxaana markale lagu gursaday goob kale oo ay seygeeda labaad ugu dhashay sedex caruur ah halka ninki ugu dambeeyay oo ay gursateyna kala heleen hal cunug.
Wararka qaar ayaa sheegaya in haweeneydaasi lagu heshiiyay in lagu aaso dalka Uganda.
← Laba ruux oo lala xiriirinaayo dilkii 4 wardiyaal oo gacanta lagu dhigay
Dalkan Kenya oo faa’ido dhan 12 bilyan helaya inta lagu guda jiro Shirweynaha lixaad ee wadamada Afrika iyo Japan →